करिब दुई दर्जन कम्पनीलाई १५ अर्बको आईपीओ निष्काशन गर्न बोर्डले दियो अनुमति, तपाईलाई कति पर्यो सेयर ? (सूचीसहित) - Arthatantra.com
करिब दुई दर्जन कम्पनीलाई १५ अर्बको आईपीओ निष्काशन गर्न बोर्डले दियो अनुमति, तपाईलाई कति पर्यो सेयर ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा कुल १५ अर्ब १७ करोड ८३ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्न स्वीकृत दिएको छ ।
बोर्डले विभिन्न २२ कम्पनीलाई १५ करोड १७ लाख ८३ हजार २८७ कित्ता आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो ।
बोर्डबाट स्वीकृति पाएका अधिकांश कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गरिसकेका छन् । गत आवको अन्त्य तिर स्वीकृति पाएका कम्पनीले भने आईपीओ निष्काशनको तयारीमा रहेका छन् ।
बोर्डले गत आवमा पहिलो पटक रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सलाई आईपीओ निष्काशनको लागि अनुमति दिएको थियो । बोर्डले गत साउन १६ गते कम्पनीलाई ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको ६३ लाख कित्ता आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिएको थियो ।
वर्षको अन्तिम समयमा भने साम्लीङ पावर कम्पनीलाई १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ३० हजार कित्ता आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिएको जनाएको छ । यो कम्पनीको आईपीओ निष्काशन गर्न बाँकी रहेको छ ।
गत आवमा सबैभन्दा बढी नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकले आईपीओ निष्काशन गरेको छ । उक्त बैंकले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ८ करोड कित्ता आईपीओ निष्काशन गरेको छ । यो कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गरेपछि आईपीओमा लगानीकर्ताको निकै आकर्षण देखिएको छ ।
कम्पनीको आईपीओ खुलेपछि डिम्याट खाता खोल्ने क्रम पनि निकै बढेको छ । आईपीओमा यो कम्पनी निकै रोलमोडल समेत देखियो ।
गत आवमा ८ वटा हाइड्रोपावर, ५ वटा माइक्रोफाइनान्स, ७ वटा इन्स्योरेन्स, १ वटा बैंकिङ र १ वटा अन्य क्षेत्रका कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति पाएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा कम्पनीहरुले आईपीओ निष्काशन गर्दा माग अनुुसार आवेदन नपर्ने, अण्डरराइटरले सकार्नुपर्ने जस्ता बाध्यता थिए । तर पछिल्लो समयमा माग भन्दा कयौ गुणा बढी आवेदन पर्ने र लक्की ड्र गरेर बाँडफाँड गर्दा धेरैको हातखाली हुने गरेको छ । आईपीओमा पनि नयाँ रेकर्ड बनेको छ । करिब २२ लाखले समेत आवेदन दिइसकेका छन् ।
गत आवमा आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति पाएका कम्पनीहरुः
वि.सं.२०७८ साउन ६ बुधवार १३:५० मा प्रकाशित
अघिल्लाे नयाँ वस्तु निर्यात र बजारमा जोड दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई महासंघको सुझाव
पछिल्लाे ‘युरो कप विथ फोन लोन योजनाका’ को विजेता बने लक्ष्मी बैंकका अशोक कुमार खाती